Hordhaca halabuurka iyo qaab dhismeedka kala firdhinta ultrasonic iyo arrimaha u baahan fiiro u isticmaalka
Xiinka Xiinka waa nooc ka mid ah mowjad farsamo oo inta jeer ee gariirku ka sareeyo tan mowjadda codka. Waxaa soo saaray gariirka transducer ka yar kacsan ee danab. Waxay leedahay astaamaha soo noqnoqoshada sarreeya, dhererka dhererka gaaban, ifafaalaha yar yar, gaar ahaan toosinta toosan, waxayna noqon kartaa faafidda jihada ee falaadhaha.
Kala firdhinta UltrasonicQalabku waa hab firidhsan oo xoog leh kaas oo loo adeegsan karo tijaabada shaybaarka iyo daweynta dufanka yar yar. Waxaa si toos ah loogu dhejiyaa aagga ultrasonic waxaana lagu shubaa ultrasonic-awood sare leh.
Qalabka kala firdhinta Xiinka wuxuu ka kooban yahay qaybaha gariirka xiinka, soosaarida quwadda korontada iyo falgalka dareeraha. Qaybaha gariirka Ultrasonic badanaa waxaa ka mid ah transducer ultrasonic-awood sare leh, geeska iyo madaxa qalabka (madaxa gudbinta), kuwaas oo loo isticmaalo in lagu soo saaro gariirka ultrasonic iyo in lagu sii daayo tamarta dareeraha dareeraha.
Transducer wuxuu u rogayaa tamarta korantada galinta tamar farsamo, oo ah mawjadda Xiinka. Muujinta ayaa ah in transducer-ku uu horay iyo gadaal ugu sii socdo jihada dheer, cabirkiisuna guud ahaan wuxuu ku socdaa dhowr mikroon. Cufnaanta kororka noocan ah kuma filna in si toos ah loo isticmaalo.
Geesku wuu ballaadhin karaa baaxadda iyada oo loo eegayo shuruudaha naqshadeynta, go'doomin karo xalka falcelinta iyo gudbiyaha, oo hagaajin kara dhammaan nidaamka gariirka ultrasonic. Madaxa qalabka wuxuu kuxiran yahay geeska, kaas oo u gudbiya gariirka tamarta ultrasonic qalabka madaxa, ka dibna tamarta ultrasonic waxaa loo gudbiyaa dareeraha falgalka kiimikada ee madaxa qalabka.
Taxaddarrada loogu talagalay isticmaalka aaladda wax ku faafisa Xiinka:
1. Taangiga biyaha lama shidi karo koronto oo lama isticmaali karo in ka badan 1 saac iyada oo aan lagu darin biyo ku filan.
2. Mashiinka waa in la dhigaa meel nadiif ah oo fidsan si loo isticmaalo, qolofku waa inuusan ku dareerin dareeraha, haddii ay jiraan, waa in la masaxaa waqti kasta si looga fogaado isku dhaca waxyaabaha adag.
3. Awoodda korantada waa in ay ahaataa mid la jaanqaadanaysa mashiinka.
4. Inta hawsha lagu gudo jiro, hadaad rabto inaad joojiso isticmaalkeeda, riix furaha hal furaha.
Waxyaabaha kor ku xusan waa waxa Xiaobian kuu keenayo maanta, isagoo rajeynaya inuu kaa caawiyo inaad si fiican u isticmaasho sheyga.